Nchekwa, Nchedo na nzuzo nke Offlọ akụ na-azụ ahịa & ihe ị ga-achọ
Nchekwa Banking na Ụlọ Nche na Nchebe
Banyere akụ na ụba na - ada ka echiche e dobere maka ndị bara ọgaranya. Eziokwu bụ na ọ ka mma karịa ma dịkwa mfe karịa ka onye nkịtị kwere na ọ ga-adị. Yabụ kedu ihe gbasara ụlọ akụ dị n'okirikiri dọtara ndị mmadụ na ya? Ọ dị mma, mgbe ị nyocha azịza ya, ị ga - achọpụta na enweghi mgbagwoju anya dịka ị ga - eche. Ihe ndekọ ego dị na mba dị iche iche na-enye ọtụtụ uru karịrị ịgba n'ụlọ. Ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị n'èzí na-enye nchekwa dị ukwuu, nwekwuo nzuzo na nnwere onwe ego na nnwere onwe karịa ka ụlọ akụ. Ihe enyemaka a ga - enyere gi aka, imuta ihe na uzo banyere ohere a.
Kedu ihe bụ Banking Banking?
Kinglọ akụ akụ na mba dị ka ọ na-ada. Ọ bụ ụlọ akụ na ebe nkwakọba ihe nke dị na mpụga obodo ebe obibi nke onye na-edebe ego. Ọ bụghị naanị obere mba dị ka Belize, ndị Caymans, na Saịprọs dị obere iji nweta ego ụgbọ mmiri. O tinye obodo dika China na mba Europe, tinyere Switzerland, Netherlands, na Belgium n'etiti ndị ọzọ. Mba ọ bụla nwere ụkpụrụ nke ya na-achịkwa etu ụlọ akụ ha si arụ ọrụ. Ma n'ikpeazụ, ha na-emekarị ihe yiri nnọọ. Nke a gụnyere gburugburu usoro nchịkwa na-enyere mkpuchi mkpuchi na nchekwa nke ụlọ akụ. Na mgbakwunye, ha na-arụ ọrụ sistemụ iji nyere ndị na-adịghị mma aka.
Gịnị Mere Bank Offshore?
Okwa ego na anoghi ego na obodo ndi obodo gi?
Azịza nke ajụjụ ahụ bụ ee, enwere ọtụtụ uru iji mepee ụlọ akụ na-abụghị nke mmiri. Otu uru kachasi mkpa ma dị oke ọnụ ahịa gbasara ụlọ akụ dị n'okirikiri bụ nzuzo. Na United States, dịka ọmụmaatụ, enwere iwu dịka Iwu Ihe Nzuzo US nke 1970. PATRIOT Act mechara. Ha na-eme ka njirimara nke ndị ejiri ego ụlọ akụ dị mfe ịchọta. Nke a na - eme ka nzuzo nchekwa akụ na ụlọ akụ mpaghara ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
Ụkpụrụ ego akụ na ụba na mba dị iche iche, n'ụzọ dị iche, jigide nzuzo nke ndị ji akaụntụ ha n'ihe gbasara nkwanye ugwu kachasị. Ya mere, ụlọ akụ dị n'ụsọ dị n'ọtụtụ ikike enweghị iwu inyefee njirimara onye nwe akaụntụ maka ndị ọzọ ọ bụla. Enwere ụfọdụ ihe ewezuga, n'ezie, dịka ezigbo ikpe mpụ dịka iyi ọha egwu, izu ahia, ma ọ bụ ịgha ego. Ọkwa nzuzo a na azụmaahịa abụghị naanị ọkọlọtọ ụlọ ọrụ. Mana enwere iwu n'ọtụtụ mba ndị nyere iwu ka nzuzo na ndị nwe akaụntụ. Nke a dị mma maka ndị nwere akụ ha chọrọ ichebe pụọ na ịgba akwụkwọ obodo.
Banyere Banking Banking for Protection Protection
Dabere na American Bar Association na 2006 United States bụ ebe obibi nke ihe karịrị otu nde ndị ọka iwu. Ọzọkwa, ikpe gbasara obodo mụbara 12% site na 1993-2002. Taa, United States nwere ọtụtụ ndị ọka iwu ụwa. Na nkenke, 80% nke ndị ọka iwu ụwa na-arụ ọrụ na US. O nwekwara otutu n’ime akwukwo ikpe ya. N'ezie United States nwere onye na-ede 96% nke ikpe ikpe ụwa. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-enweghị atụ. Nke a kwesịrị ime ka nchebe akụ gị bụrụ ihe kacha mkpa.
Dị ka ọtụtụ ndị mmadụ siri mara, ebubo jọgburu onwe ya, ọbụlagodi na ọ bụ ụgha na-agha ụgha, nwere ike imerụ ọdịmma mmadụ. Nke a bụ ikpe ma ọ bụrụ na ịgba akwụkwọ ahụ aga-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ gaghị. Feesgwọ iwu kwadoro onye ọ bụla chọrọ ịgbachitere ikpe nwere ike ịdị oke mkpa. N’ihi nke a, ọ na-adị ọnụ ala karịa ịtụba ego nye onye gbara akwụkwọ iji mee ka ikpe pụọ. Site n’itinye akụ gị n’ụlọ akụ nke dị n’akụkụ oke osimiri ị na - echekwa onwe gị pụọ n’aka ndị ọka iwu na - emebi iwu. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị naanị na akụ gị nwere ikike na mpaghara ọzọ karịa nke ị bi na ya. Mana iwu nzuzo siri ike na-achịkwa ụlọ akụ.
Ikpuchukwu ihe diri gi
Ọkwa nke nchekwa akụ na ụba nke ihe ndị dị na mpụga ụlọ akụ na-enye dị oke mkpa. Nke a bụ nnukwu azụmaahịa nye ndị ọchụnta ego chọrọ ịchekwa ihe ha kpatara. Enwere njiko nzuzo nzuzo siri ike na ijigide akụ n'okpuru ikike iwu siri ike iru. Ihe mgbochi abụọ a ga-akụda ọtụtụ ndị ọka iwu na-agbaso ikpe megide gị. Nke a bụ n'ihi nnukwu ihe isi ike iji nweta “ebe ịkwụ ụgwọ ụbọchị”.
Ọ dị mkpa ịmara na anaghị enweta nchekwa nchekwa akụ na ụba naanị site na akaụntụ akụ. Ihe kpatara nke a. Ọ bụrụ na ijide akaụntụ ahụ n'onwe gị, onye ọka ikpe nwere ike nye gị iwu ka ị weghachite ego na akaụntụ nke oke osimiri. Ọ bụrụ na nwoke nke uwe ojii na-ejide akwa ahụ nyere iwu, ọ ga-amanye gị ime nke a.
Nchebe pụọ n'ụlọ ikpe ọ̀ dị gị mkpa? Ọ bụrụ otu a, njide na-ejide akaụntụ ahụ na ntụkwasị obi nchekwa nke oke osimiri dị mkpa maka onye enyemaka nwere ikikere. Nke ahụ bụ, jigide ego n'ime ntụkwasị obi gị, nke onye ikike ikikere, ego mkpuchi, onye amara aha ya, na-echekwa ya. Nke a bụ n'ihi na mgbe ị na - eme ya, ị na - atụgharị tebụl. Onye nlekọta ụlọ na-ebi n'akụkụ mmiri. Yabụ, onye ọka iwu mpaghara enweghị ikike ịmanye ndị gọọmentị mba ọzọ ịchọrọ irube isi.
Nnwere Onwe Ego
Enwere uru na mgbakwunye na nzuzo nzuzo. Ihe ndekọ akụ na mba na-enyekwa nnwere onwe dị ukwuu karịa ihe ndekọ ego ụlọ. Ihe ndekọ ụlọ nwere ike igbochi gị itinye aka na ọrụ nlekọta akụnụba ụfọdụ. Mana ọtụtụ ụlọ akụ dị n’akụkụ mmiri nwere ike imepe ohere ndị a na-enye ezigbo ego na uru bara uru. Onwere otu ihe kpatara eji etinye ohere a na ulo oru ndi anoghi ahia na ndi ahia ha. Ọ bụ n'ihi na gọọmenti anaghị etinye ego na mpaghara akụ na ụma n'ọtụtụ mpaghara.
Site na akaụntụ akụ dị n'ụsọ ị nwere ike ịnụ ụtọ uru nke iji ego mba ụwa. Nwere ike ime nke ahụ na ego dị iche iche. I gbakwunye rates nwere ike receivenata ego ngbanwe ka nma maka ego oru. Inye akaụntụ akụ nke mba ọzọ na-emeghe ohere maka azụmaahịa na-adịghị na mpaghara ụfọdụ. Yabụ, ịpụ apụ apụ na-enye ohere itinye ego dị mfe n'ahịa na mba ndị na-emepe emepe. Nke a na-enyekarị ndị na - etinye ego ohere ị nweta nloghachi dị mma karịa itinye ego ha karịa nke ha nwere ike inweta n'ụlọ. Enwere itinye ego na ohere azụmahịa na ụfọdụ ihe ndekọ ego nke mba ọzọ. Nke a nwere ike ịgụnye ijide pọtụfoliyo ahịa na / ma ọ bụ ọla dị oke ọnụ ahịa. Na mgbakwunye, ọtụtụ oge a na-enyekwu ọmụrụ nwa dị mma ha na-enye ndị nwere akaụntụ ha.
Kedu ihe dị mma? Ụlọ akụ na United States ma ọ bụ Banyere n'Ọdụ Mmiri?
Uru ọzọ a na-erite site n’inwe ihe ndekọ ego dị n’akụkụ mmiri bụ na n’ọtụtụ ọchịchị, ụlọ akụ na-akwụsi ike. Ugbu a amatala m ihe ị nwere ike ịdị na-eche ugbu a: "Kedu ka nke ahụ ga - esi kwe omume?" Eziokwu doro anya nke okwu ahụ bụ na n'etiti 2008 na 2012, enwere ndị ụlọ akụ US 465 na - emezughị. Ọzọkwa, nyocha omimi banyere nyocha nke afọ ọhụrụ kacha ọhụrụ site na Global Finance chọpụtara nke a. Nke Ulo ahia nke 50 kachasi nma nke uwa naanị atọ (3) ụlọ akụ US mere ndepụta ahụ. Enweghị ọbụna otu ụlọ akụ US na nnukwu ụlọ akụ kachasị mma nke 30. Ọ bụghị otu. Dabere na ndepụta a, ụlọ akụ kachasị mma nke 10 kachasị n'ụwa niile dị na Europe.
Ugbu a nke a abụghị ikwu na ụlọ ọrụ nchekwa akụ US na-eru nso. Nke ahụ bụ, ndakpọ akụ na ụba adịchaghị mma n'akụkụ. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi na enwere mba ndị dị na mpaghara ndị na-enye nkwụsi ike ụlọ akụ karịa US. Nke a na - abụkarị site na usoro iwu mkpuchi ụlọ akụ chọrọ akwụkwọ ndozi ego siri ike. Gbakwunyere na ọtụtụ ụlọ ọrụ a na-enye nhaghachi azụ nke ndị nwere akaụntụ ma nye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke itinye ego. Ọkwa a kwụ chịm na-eme ka ndị jidere akaụntụ ahụ ịmụba akụ ha. Ọ na-enyekwa ha ohere iji chebe akụ ahụ nke ọma ma chekwaa ihe nzuzo ha.
Ngwongwo Echefuru Banyere Mbanye
N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị mmadụ nwere echiche na ịnweta akaụntụ akụ nke mba ọzọ bụ usoro dị ogologo, nke na-agwụ ike. Ha chere na ọ bụ naanị maka ole na ole; maka ndị nwere ike ịkwụ ụgwọ ndị ọka iwu dị elu ma kwụọ ụgwọ iji guzobe akaụntụ ndị dị n'akụkụ. Nke a nwere ike ịbụ eziokwu kemgbe ọtụtụ iri afọ gara aga mgbe ịhazi akaụntụ akụ na mba ndị ọzọ were sie ike. Ọzọkwa, ha dị oke ọnụ n'ihi mkpa ọ dị ịga akụ. Mana emesịrị ọmụmụ nke afọ dijitalụ yana ojiji nke kọmputa ejikọtara na ịntanetị. Yabụ, taa, inweta ma lelee ihe ndekọ ego dị n'ụsọ ụlọ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ dị mfe dịka akaụntụ ụlọ akụ na-arụ ọrụ.
N’ụbọchị a na ihe dị ka onye toro eto ọ bụla nwere ike itinye akwụkwọ maka ego ụlọ akụ. Ọ bụ okwu dị mfe maka ịkpọtụrụ onye nkuzi ruru eru dịka nzukọ anyị. Thentanetị ewepụla ihe ngosi nke akaụntụ akụ dị na mba ndị ọzọ. O jirila otu aka mepụta gburugburu ebe onye ọ bụla nwere ike itinye akwụkwọ. Naanị ihe onye ọ bụla nwere ike ịnwe akaụntụ na-enweghị ịkwụ ụgwọ iwu na oke nhazi na ndị ọka iwu. Gbakwunyere na iwu akwadoghị njem gaa na ọnọdụ nke ụlọ akụ dị n'okirikiri n'ọtụtụ ikike. Ọrụ ndị dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na-enye ugbu a nwere ike ịgakwuru onye ọ bụla. Ya mere, ọ dị mfe karịa itinye akwụkwọ maka ihe ndekọ ego ụlọ akụ ma nweta uru ya karịa na mmadụ nwere ike iche.
Banlọ akụ sholọ Mpụga: Ọ Dịịrị Gị?
Ihe ndekọ akụ nke mba dị na gburugburu jiri ọtụtụ mystique gbaa gburugburu n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Ọha mmadụ kwenyere na ndị ụlọ akụ na-echekwa uru ndị a maka naanị ndị mmadụ kacha baa uru. N'ihi ya, ha na-ahụta na uru niile a ga-erite na ya bụ maka naanị onye nke ọzọ. Nke ahụ bụ otu nkwenye na anyị nwere obi ụtọ ikwupụta abụghị eziokwu. E nwekwara ọtụtụ uru maka gị.
Abamuru nke nzuzo, nchedo ego, nkwụsi ike nke ụlọ ọrụ, na mgbanwe na mmezi ụlọ akụ dị maka mmadụ niile. Are bu onye nwe ahia nke na acho ichekwa ihe ahia ya? You bu onye choro ibanye na ohere itu ura na ahia ndi mba ozo? Ọ bụrụ otu a, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahụ maka nchekwa bara ụba na-atụmasị anya ilebanye anya na ịnweta ụlọ akụ dị n'akụkụ mmiri.
Banyere Banking Banking Nzuzo na Nche
Ichekwa ego na nchekwa na nchekwa bụ nnukwu nchegbu. Ọ bụ mkpa ka gị na ego gị chebe. OffshoreCompany.com na-atụ aro mgbe niile ụlọ ọrụ ụlọ akụ na-esonye na sistemụ akụ. A na-achịkwa sistemụ ahụ nke ọma. Ọ na - eme usoro ịkwụ ụgwọ siri ike, nke na - eweta akụrụngwa siri ike na nlekọta onwe ha maka ụlọ akụ ndị dị n'akụkụ mmiri.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ụlọ ọrụ America na ndị si mba ọzọ na ndị ọrụ gọọmentị obodo nchekwa ndekọ ego maka nchekwa na nke onwe. Ulo akwukwo a na enye oru aka ma kwado aku na uba obodo. Nke ahụ bụ, akụnụba ha dabere na ngalaba ọrụ ego. N'ihi ya, iwu nzuzo na nchekwa nchekwa ego bụ ihe toro ogologo ma kwụsie ike. Ọ dị oke mkpa na ndị ahịa niile na-achọ ịhọrọ ikike. Anyị na-eme nnyocha sara mbara n'ọtụtụ ndị na - enye ụlọ akụ na - ahụ maka ihe ndị dị elu. Ọzọkwa, anyị nwere obi ụtọ inye gị ozi enyemaka iji nyere gị aka ịme nhọrọ dị mma.
Bankslọ akụ ndị dịpụrụ adịpụ na mba ụfọdụ na-esonye na usoro mkpuchi mkpuchi nchekwa ego. Ha na-ejikwa nchekwa na nzuzo akpọrọ ihe. Ndị na-eme iwu na-emechi iwu siri ike securitylọ akụ nchekwa. Ha na-etinye iwu ike. Nke ahụ bụ, iwu kpebiri oke ụlọ akụ ozi na-esoro ndị ọzọ, gụnyere gọọmentị mba ọzọ. Dị ka o kwesịrị ịdị, iwu nyere ndị na-enye ihe ndekọ ego ohere ịkekọrịta ozi n'ihe banyere oke mpụ ma ọ bụ iyi ọha egwu. Ha anaghị eji ihe nzuzo akụ ichekwa ego na nzuzo.
Nzuzo Switzerland Banks
Dịka ọmụmaatụ, na Switzerland, iwu siri ike na onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-emebi ihe nzuzo ndị ahịa. Nke a gụnyere oke iwu siri ike na oge nga. Yabụ, ha na-ewere nzuzo nzuzo nke ego. Ọ dịkwa mkpa na ụlọ akụ mba ọzọ enweghị alaka ụlọ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na enwere ike ịta alaka ụlọ ọrụ ntaramahụhụ ruo mgbe alaka ụlọ ọrụ si mba ọzọ mejupụtara ego ahụ. Kedu ụlọ akụ nwere kacha mma maka nchekwa, nchekwa, ihe ntanetị ma nabata ndị ahịa si mba ọzọ n'ihu ọha? Ọ bụ ebe ụlọ ọrụ dị ka nke a na-abata. Jiri nọmba ma ọ bụ ụdị dị na peeji a maka enyemaka.
Ndị a bụ ụfọdụ ikpe na-ahụ maka ụlọ akụ na-echekwa onwe ha:
Islands Channel (Jersey na Guernsey)
OffshoreCompany.com azụlitewo mmekọrịta dị ogologo na ụlọ mmiri ndị dị n'akụkụ. Anyị na-eme nyocha mgbe niile, ịdị uchu na nzukọ ndị mmadụ. Ime nke a na-enyere aka hụ na oke akụ nke ọdụ ụgbọ mmiri anyị na-enyere ndị ahịa aka ịchebe nwere ike ọ nweghị nchekwa. Goghere anyị ozi ndị ọzọ gbasara anyị ma ọ bụ imepe akaụntụ n'ime ụlọ akụ echekwara.
<Isi nke 4
Isi nke 6>